Ugari neInvestment yeSanta Lucia uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunoshanda Sevhisi muSanta Lucia ye:
● Kugara nekudyara muSanta Lucia
● Ugari nekudyara kubva kuSanta Lucia
● Visa yegoridhe muSanta Lucia
● Pasipoti yepiri kubva kuSanta Lucia
● Ugari nekudyara kuSanta Lucia nekudyara muzvivakwa
Best Vamiriri veCitizenship neInvestment muSanta Lucia uye Magweta e Citizenship by Investment in Saint Lucia uye brokers kune real estate Zvirongwa zvekuva mugari muSaint Lucia zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Citizenship neInvestment vamiririri veSanta Lucia vanopa masevhisi ekugara nekudyara muSaint Lucia, Citizenship nemapurogiramu ekudyara muSaint Lucia, Citizenship nehurongwa hwekudyara muSaint Lucia, Citizenship yechipiri nekudyara muSaint Lucia, hunyanzvi hwekuva Citizenship nekudyara muSaint Lucia, ugari nekugara nekudyara muSaint Lucia, Citizenship yekusingaperi nekudyara muSaint Lucia, Citizenship kwenguva pfupi nekudyara muSaint Lucia, Citizenship neinvestment scheme muSanta Lucia, Citizenship nehurongwa hwekudyara muSaint Lucia, Residency nekudyara muSaint Lucia, Residency nekudyara zvirongwa muSaint Lucia, Residency nehurongwa hwekudyara muSanta Lucia, yechipiri Residency nekudyara muSanta Lucia, hunyanzvi Residency nekudyara muSanta Lucia, pekugara uye ugari hwekugara nekudyara muSanta Lucia, ugari hwekugara uye ugari hwekudyara muSain Lucia, hupfumi Residency zvirongwa muSanta Lucia, Kugara nehurongwa hwekudyara muSaint Lucia, Re kusarudzika kwezvirongwa zvekudyara muSanta Lucia, yechipiri pasipoti muSanta Lucia, yechipiri mapasipoti muSaint Lucia, yechipiri pasipoti chirongwa muSanta Lucia, mbiri mbiri pasipoti muSanta Lucia, pekugara uye pasipoti yechipiri muSaint Lucia, repasipoti repasipoti repiri muSaint Lucia, yechipiri pasipoti nekudyara muSanta Lucia, yechipiri ugari pasipoti muSanta Lucia, yechipiri pasipoti chirongwa muSanta Lucia, yechipiri pasipoti zvirongwa muSanta Lucia, vhiza yegoridhe muSanta Lucia, mavhiza egoridhe muSaint Lucia, zvirongwa zvevisa zvegoridhe muSaint Lucia, goridhe visa chirongwa muSaint Lucia, yechipiri vhiza yegoridhe muSanta Lucia, yechipiri vhiza vhiza chirongwa muSanta Lucia, mbiri dhiza vhiza muSanta Lucia, ugari uye visa yegoridhe muSanta Lucia, kugara uye visa yegoridhe muSaint Lucia, mugari vhiza mugari muSanta Lucia, goridhe vhiza scheme muSanta Lucia, goridhe vhiza zvirongwa muSaint Lucia.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Citizenship nekudyara muSaint Lucia nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muSanta Lucia yeU Citizenship nekudyara: USD 200,000
Nhanganyaya Saint Lucia uye Citizenship neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveSanta Lucia
St Lucia chitsuwa chinodakadza cheCaribbean chevagari 173,996 vanogara munzvimbo yemakiromita 616. Pasi rose rinoonekwa nekuda kwezviitiko zvaro zvakakura uye kugutsikana kwega kwega, St Lucia yaona kuwedzerwa kwezvinhu zvakakwirira zvevatorwa vari kutama pachitsuwa ichi. Nemutauro mukuru uri Chirungu, uye nendege yepasi rese inosanganidza St Lucia neUS, Europe, neCanada, St Lucia inzvimbo inobatsira kugara mairi.
Chikamu chakakura chevagari veSt Lucia vanogara kuchamhembe kwakadziva kumadokero kwechikamu chechitsuwa, nepo chikamu chekumaodzanyemba chinoramba chiri chisina kusimba. Aya marongero anofunga nezvevazvipiri vanozvipira kuti vagare munzvimbo dzakadzikama, semuenzaniso, Soufriere neMarigot Bay, nepo avo vanotsvaga nzvimbo dzese dzinofarira vanowana zvakawanda zvekuita muCastries neRodney Bay.
Natural-sweethearts inozokoshesa yakachena chena jecha pamhenderekedzo yegungwa, isina gwapa mvura, inosimbisa macascades, uye akapfuma masango emvura, nepo avo vachisarudza hupenyu hweguta vanozowana yakawanda maresitorendi, mabhawa, zvitoro, uye nhandaro nhambo dzekujoinha - semuenzaniso, Jazz uye Mutambo weZviitiko, iyo Atlantic Rally yeva Cruisers kana iyo La Margeurite Ruva mutambo. Nemitsara yaro yegungwa ine jecha, ichikonzera kokonati michindwe, mvura inodziya, nemakorari matombo, Saint Lucia iri pasina mubvunzo denga. St.Lucia yafambira mberi, nguva pfupi yadarika, kupinda mune imwe yenzvimbo dzakakurumbira dzekushanya uye kupokana kwakasimba kwevakura. Vakaroorana havasi kungokwezva nehukuru hwechiwi hwechitsuwa, asi neyakajairika nzira yeupenyu yeSt Lucia.
Imwe yeWindward Islands yeWest Indies 'Mashoma Antilles, Saint Lucia yakarongedzwa pakati peMartinique neSt Vincent. IAtlantic Ocean inokomberedza zvitsuwa mazana maviri nesere-mamaira kumahombekombe ekumabvazuva, nepo gungwa rakanyarara reCaribbean Gungwa richikwira kumahombekombe kwaro kumadokero. Pamwoyo pechitsuwa, sango risinganetsi rinofukidza makomo akaomarara. Zvakare, mumupata uri pasi pane minda yakaibva. Zvakare, makuru emabanana maitiro akapararira pakati pezviviri. Chiitiko cheSt. Lucia zvakare chinoyeuka mumwe wevakaroora vepasirese vekuchaira-kwemakomo Panguva iyoyo, kune maPitons, siginecha mapatya emakomo anoputika ayo anodarika anopfuura mazana maviri emamita pamusoro penyanza.
Iwo maPitons anochengetedzwa seUNESCO World Heritage Saiti. Ichi chitsuwa chidiki chaendesa maviri akanakisa Mubayiro weNobel, vanoongorora zvemari Sir Arthur Lewis uye muimbi uye mutambi wemitambo Derek Walcott. Rudo rwaSanta Lucian ku "hop up" (kutamba mumugwagwa) uye hapana mukana wakasarudzika wekushanyira pamusoro peimwe yemhemberero dzeichi chitsuwa. Mutambo wakakurumbira weSanta Lucia Jazz muna Chivabvu unodhonza vanovaraidza uye vanhu vazhinji kubva kupasi rese. Zvakaringana muna Chikunguru uye Zuva reCreole renyika muna Gumiguru, zvisinei, ndipo panotaridzika tsika yakasununguka pachitsuwa ichi, yakajeka tsika nekuzvifora kwemusango inodhura uye mumhanzi wechivanhu nekutamba.
Zvisinei nemwaka wei waunoshanyira, iwe uchaona Saint Lucia ichirova nemitambo inopisa yecalypso, mutinhimira, zouk, simbi skillet, soca, uye reggae mimhanzi. NeChishanu manheru, vagari uye vanoona rwizi rwumwe chete kupinda mudhorobha rekubata hove reGros Islet kwevhiki ine mhere-mhere mushure mevhiki bato remumigwagwa iro rinotenderera nguva dza10 manheru zvakare, rinotsungirira kusvika mangwanani-ngwanani. Mabhawa anovhura mapindiro avo uye vanopururudzira mimhanzi ine ruzha mumugwagwa, nepo vatengesi vachitengesa hove dzegungwa, grill, uye hotcake. Revelers vanotamba pasi peredzi nenyere dzechirongo mune rumwe ruoko uye chinonaka chakakangwa huku gumbo mune rimwe.
Nzvimbo dzepedyo dzebhasikiti, yevhu, yekuveza matanda, uye matombo anokosha anoshandiswa achishandisa mbeu akakosha kuhupfumi hwenzvimbo uye nemararamiro eSt. Lucia. Perusing chikamu chakakura chemafaro paCastries Central Market uye Vendor's Arcade uye kuChoiseul Arts neCraft Center.
Zvekutanga ruzivo rweCitizenship neInvestment yeSanta Lucia
Chishoma kudyara kwe Ugari nekudyara muSanta Lucia
Mari yekuwedzera ye yendarama vhiza ye Sendi Rusiya
Citizenship nekudyara kweSanta Lucia
Kuchengetedza nguva yeU Citizenship nekudyara kweSaint Lucia
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa vagari vemuSaint Lucia
Investment Sarudzo dze Ugari nekudyara kweSanta Lucia
Real estate / Investment / Mupiro
Nei uchienda kuCitizenship nekudyara kweSaint Lucia
Saint Lucia, inoyevedza inoyevedza uye iine zuva pachitsuwa cheCaribbean, iri kupa imwe yeanokurumidza uye akanaka mapurogiramu epasipoti egoridhe munyika. Iwe unozokwanisa kufamba vhiza-yemahara kune dzinopfuura nyika zana uye zvakare zvinokwanisika kusanganisa nhengo dzako dzemhuri dzepedyo muchikumbiro.Hapana chikonzero chakazara chekufamba kuenda kuSanta Lucia uri munhu panguva yekunyorera uye hapana pekugara. chinodikanwa chakabatana nehugari hwemuSaint Lucia, kunyangwe mushure mekugamuchirwa kuve mugari wenyika. Nekuda kweiyo tax-inoshamwaridza system Saint Lucia zvishandiso, haufanire kubhadhara mutero pane yako yepasirese mari.
Kufamba kwemhuri muSaint Lucia
Mukushandisa kwako kunogona kusanganisirwa nhengo dzemhuri dzinotsigirwa nemari kusanganisira vana vakavimbika vari pasi pemakore makumi maviri nemashanu, pamwe nevabereki uye vanasekuru navanasekuru vanopfuura makumi matanhatu nemashanu vanokodzera, izvo zvinowedzera kunyaradzwa nekuchengetedzeka kwepasipoti yako nyowani kune avo vari padyo iwe. Kupfuurirazve, nhengo dzemhuri dzinovimba dzine zvidikanwi zvinogona zvakare kutarisirwa kunze kwemabhureki ezera
Citizenship Nehurongwa hwekudyara muSanta Lucia inokurudzira
Iyo yehugari-ne-yekudyara chirongwa cheSaint Lucia ndeimwe yeanokurumidza uye akananga iwo anongotora chete 3-4 mwedzi uye pasina chinodikanwa chekuve neakare manejimendi ruzivo kana hunhu. Iko kunyorera kunogona kuendeswa nemagetsi kana pabepa kubva kune yako nyika yekumba. Mukati memazuva makumi matanhatu ekugamuchira mvumo yehurumende mari inofanirwa kutanga.
Mari inodiwa yeSanta Lucia
Iyo yegoridhe pasipoti chirongwa cheSanta Lucia iri kupa 3 nzira dzekudyara. Chekutanga sarudzo inoda isingadzokere mari yemupiro weUS $ 100,000.
Chechipiri imwe nzira ndeyekudyara muhurumende-yakatenderwa real estate purojekiti, uye chengetedza iyo investa kweinenge makore mashanu, iwo mashoma anotarisirwa huwandu ayo ari USD 5.
Sarudzo yechitatu inogona kuve yekudyara muE Enterprise Project. Mune ino kesi iyo shoma inodikanwa ndeye USD 3,500,000 pamwe nechikumbiro chekugadzirwa kweinenge 3 zvachose basa. Muchiitiko chekudyara kwekubatana, mumwe nemumwe anonyorera anofanirwa kupa anosvika madhora chiuru chimwe chete kumadhora ese ezveUS $ 1,000,000 Pasi pesarudzo yekubatana, huwandu hushoma hwemabasa ekusingaperi anofanirwa kugadzirwa ari matanhatu.
Kune yega yega sarudzo dzataurwa pamusoro apa, mubhadharo wekubhadharira unokosha weUS $ 7,500 uye mari yehurumende yekugadzirisa yeUSD 2,000 inobhadharwa. Uye zvakare, mubhadharo wehurumende wekutungamira weUS $ 50,000 unobhadharwa kune real estate uye Enterprise Project kudyara.
Kutsigira kwevatengi kweCitizenship nekudyara kweSanta Lucia
Chikwata chedu che Citizenship neInvestment Agents eSanta Lucia uye Citizenship ne Investment Lawyers kweSanta Lucia inopa vatengi uye mhuri dzavo muSaint Lucia nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuSanta Lucia, kugara nekudyara kubva kuSaint Lucia uye mimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira mukugara nekudyara kubva kuSanta Lucia kana Golden Visa kubva kuSanta Lucia kana ugari hwekudyara kubva kuSanta Lucia kana pasipoti yechipiri, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara dzimba kubva kuSanta Lucia, ichipa mhinduro izere kana uchida simudza kambani muSanta Lucia kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muSanta Lucia uye nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuSaint Lucia nekugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha rwevagari vemuSaint Lucia:
Isu tinopa zvinodhura Citizenship nekudyara mabasa Saint Lucia, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeChristian Lucia, inokwanisika mari yekutsvaga mari yekupinda kune dzimwe nyika veSanta Lucia, Citizenship inodhura nevezvekudyara mari kuSanta Lucia, Citizenship inodhura nemagweta ekudyara eSaint Lucia uye nekambani yekutambira yekufambisa yeSaint Lucia.
Ugari nekudyara kubva kuSanta Lucia kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muSanta Lucia kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuSanta Lucia kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuSanta Lucia kuenda ku106 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuSanta Lucia.
Goridhe visa zvirongwa muSanta Lucia kuenda ku37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuSanta Lucia kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuSanta Lucia kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda kubva kuSaint Lucia kuenda ku106 Nyika.
Ugari neInvestment yeSaint Lucia kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muSaint Lucia nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana zvakanaka kudzoka mukudyara muSanta Lucia, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kwevaMagari kwavo nekudyara kweSaint Lucia. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa muSt.Lucia vane rondedzero yakanaka uye yavo zvivakwa zviri munzvimbo dzakanaka muSaint Lucia, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa edzimba dzimba zvirongwa zveSaint Lucia nekudyara muzvivakwa muSaint Lucia.
Unoda kuziva - Saint Lucia Citizenship neInvestment
Citizenship neInvestment Gweta reSanta Lucia rinopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Citizenship nekudyara kuSanta Lucia. Yedu yakajairwa masevhisi e Citizenship neInvestment kuSanta Lucia inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuSanta Lucia kana kuSaint Lucia, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Citizenship nekudyara kweSt.Lucia kune vatengi kuti vawane Citizenship yeSanta Lucia uye kudzikisa njodzi yekuramba.
Zvichienderana neyakafanira kushingairira mushumo weSanta Lucia, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neU Citizenship hwako nechikumbiro chekudyara kuSanta Lucia isu taizoda makopi akaongororwa evatengi nenhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile emagwaro Zvizvarwa zvemo nekudyara kunyorera Saint Lucia. Magweta edu akasarudzika e Citizenship nekudyara kweSt.Lucia uye vhiza yegoridhe ichabatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveCitizenship nekudyara kunyorera kwaSanta Lucia zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveSaint Lucia.
Kamwe chikumbiro chako cheCitizenship nekudyara kweSanta Lucia chabvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye totanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Hatitsigire kana kupa Citizenship neinvestment services muSaint Lucia kune pazasi vanotaurwa Vanhu kana mabhizinesi muSaint Lucia:
Citizenship nebasa rekudyara reSanta Lucia hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vagoveri vemaoko uye mabara kubva kana kuSaint Lucia.
Citizenship nezvirongwa zvekudyara zveSanta Lucia hadzipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muSanta Lucia kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuSaint Lucia.
Citizenship nekutsvaga kwekudyara kweSanta Lucia hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana zvematsotsi zviitiko muSanta Lucia.
Citizenship nerutsigiro rwekudyara kweSanta Lucia hazvisi zvevanhu vanobata maGenetic zvinhu muSanta Lucia.
Citizenship nebasa rekudyara reSanta Lucia haisi yemabhizinesi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muSanta Lucia.
Citizenship nechirongwa chekudyara rutsigiro rweSanta Lucia haruwanikwe kune vanhu veSanta Lucia vanobata mukutengesa, kuchengetedza muSaint Lucia, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Citizenship nekudyara kweSanta Lucia haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Citizenship zvirongwa zvebasa kweSanta Lucia hadzisi dzezvitendero zvechitendero uye avo anobatsira muSanta Lucia.
Citizenship nebasa rekudyara mu Sendi Rusiya haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muSanta Lucia.
Ugari Hwedu magweta muSanta Lucia haitsigire bhizinesi rekutengeserana nezvinodhaka muSt.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadzira AML zvinyorwa zvevatengi veSanta Lucia neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muSanta Lucia kubvumidzwa kwekunyorera Citizenship nekudyara muSanta Lucia.
Ugari nekudyara muSanta Lucia nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa Citizenship yakanakisa nerutsigiro rwekudyara muSaint Lucia yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muSaint Lucia.
Inotsigirwa nehukama hwepasi rose neyakavanzika ruzivo uye mari yaSanta Lucia, isu tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Hwedu Citizenship nekudyara masevhisi eSaint Lucia inopa yakachipa mitengo, ine yakanakisa inogona kubudirira mwero weSanta Lucia.
Isu takatora makore eruzivo kune hunyanzvi hwekuva Citizenship kuSaint Lucia inotsigira vatengi pamwe nemhuri dzavo kuSanta Lucia.
Ruzivo rwekuva Citizenship nekudyara vanokumbira kuSanta Lucia nevamiriri vepamutemo veSanta Lucia vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanyanya magweta uye vamiririri veSanta Lucia kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi peCitizenship chako cheSanta Lucia uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro ichave iriko kune bhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuna Saint Lucia
Isu tine ruzivo rwepasi rese mu Citizenship nekudyara kusanganisira Saint Lucia, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Kana zvadaro, Citizenship yako nekudyara kuSanta Lucia ikakundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu nenomwe dzatinoshandira, takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weCitizenship neInvestment kuSanta Lucia
Kuti uverenge mutengo weCitizenship nekudyara kweSanta Lucia ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veSanta Lucia, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchasanganisira, kunosanganisira, mutengo weCitizenship nehurongwa hwekudyara kuSanta Lucia uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza kweSanta Lucia
Maitiro Ekubvumidza Kubasa kwaSanta Lucia
Kwekugara kwenguva pfupi muSanta Lucia
Permanent Residence muSanta Lucia
Embassies uye Consulates yeSanta Lucia
Mitero muSanta Lucia
Ugari neInvestment muSanta Lucia uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muSanta Lucia nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuSanta Lucia nekudyara mari, isu semumwe wako weSaint Lucia, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muSaint Lucia nemitengo isingadhuri.
Kunze kweCitizenship nekutsvaga kwekudyara kuSanta Lucia, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muSaint Lucia, iyo iwe yausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanopa mazano veSanta Lucia ichitigadzira shopu-yekumira yeSt.Lucia nenyika 106 .
"Takaisa makore ekuyedza uye nepasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi reSanta Lucia mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira nzira yemutengi wedu kupfuura Citizenship nekudyara kweSt.Lucia nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga muSt.Lucia nepasirese.
Kambani muSanta Lucia
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muSanta Lucia kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muSaint Lucia yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muSanta Lucia
Chero ani investor anotamira kuSanta Lucia angazoda account yako yebhangi muSanta Lucia uye account yebhangi yekambani muSanta Lucia, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Peji yekubhadhara muSanta Lucia
Incase iwe unoda kubvunzana muSanta Lucia, ye mhinduro dzemadhijitari muSanta Lucia senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muSaint Lucia kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meCitizenship nekudyara ku Saint Lucia kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga bhizinesi riripo muSanta Lucia kwekutanga pakarepo muSaint Lucia.
HR Services muSanta Lucia
Our kambani yevashandi muSanta Lucia inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare kutumira nzvimbo muSanta Lucia vakasununguka.
Virtual Nhare dzeNhamba dzeSanta Lucia
Bhizinesi foni nhare dzeSanta Lucia pamwe ne chaiwo manhamba eSaint Lucia Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muSanta Lucia
Accounting, kushingairira kwakakodzera muSanta Lucia uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muSanta Lucia
Setup bhizinesi muSanta Lucia
Mushure meCitizenship nekudyara kuSanta Lucia, setup bhizinesi mu Sendi Rusiya.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muSanta Lucia
Webhu Kugadzira muSanta Lucia
Ecommerce Kuvandudza muSaint Lucia
Webhu kuvandudza muSanta Lucia
Kubudirira kweBlockchain muSanta Lucia
App Kubudirira muSaint Lucia
Software Kubudirira muSaint Lucia
SEO muSanta Lucia
Magweta e Citizenship neInvestment muSanta Lucia
Isu tinopa Citizenship yepamutemo neInvestment mhinduro dzeSaint Lucia uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, nekuti Saint Lucia, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo yeSanta Lucia ine vamiririri vevanoona nezvekupinda zvakanaka muSaint Lucia, isu tine mukurumbira wekuendesa yakanakisa sevhisi sevhisi. ruzivo rweSanta Lucia neyakajeka nzira dzekudyara mhinduro kuSanta Lucia vanhu pamwe nemhuri dzavo. Hedu Citizenship neboka rekudyara reSanta Lucia inopa zvakagadziriswa mhinduro dzekubudirira kweiye Mutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mudzimai, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuSanta Lucia, pamvumo yako yekugara muSaint Lucia inogamuchirwa.
Simba regweta reSanta Lucia rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neCitizenship nevemagweta ekudyara muSaint Lucia. Kana iwe uri muSanta Lucia kana kuronga kushanyira Saint Lucia, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadharise zvimwe kuti tiwane Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kweSanta Lucia iri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mundima yeSaint Lucia. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yekupostora kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weSanta Lucia.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Ugari neInvestment muSaint Lucia
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muSanta Lucia?
Kugara nekudyara kuSanta Lucia, kunogona kutsanangurwa sekuti, kuwana ugaro hweSaint Lucia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSanta Lucia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. chirongwa chekudyara cheSanta Lucia chinotsigirwa nehugaro hwekugara nenzvimbo dzekudyara kuSanta Lucia, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muSaint Lucia, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muSaint Lucia uye kugara kwakanyanya nevanoona nezvekudyara kweSt.Lucia, vachishanda pakanaka pekugara nekudyara vamiririri muSanta Lucia, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muSouth Lucia.
Kugara patsva nemabasa ekudyara kuSanta Lucia | Kugara patsva nevamiriri vemari muSanta Lucia | Kugara patsva nemagweta eInvestment muSanta Lucia | Kugara patsva nemagweta ekudyara muSanta Lucia | Kugara patsva nevanoona nezvekudyara kweSanta Lucia
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muSanta Lucia?
Citizenship kubudikidza nekudyara kuSanta Lucia, inogona kutsanangurwa se, kuwana ugari hweSanta Lucia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSaint Lucia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muSaint Lucia. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuSanta Lucia, ugari nehurongwa hwekudyara kuSanta Lucia inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuSanta Lucia, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisa nemagweta ekudyara muSaint Lucia, ugari hwakanakisa nemagweta ekudyara muSaint Lucia uye ugari hwakanaka nekudyara varairidzi veSanta Lucia, vachishanda pahukama hwakanakisa nevamiririri vezvekudyara muSanta Lucia, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muSouth Lucia.
Affordable Investor immigration services yeSanta Lucia | Vanodhura vekupinda munyika vanokumbira muSanta Lucia | Vanodhura vatyairi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muSanta Lucia | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muSanta Lucia | Vanodhura varidzi vemari vanoona nezvekupinda muSanta Lucia | Affordable immigration law firms eSaint Lucia
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muSanta Lucia?
Yechipiri pasipoti muSanta Lucia, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mugari wepamutemo weSanta Lucia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSaint Lucia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, real estate, bhizinesi, hurumende zvisungo, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuSanta Lucia, yechipiri pasipoti chirongwa yeChristian Lucia inotsigirwa neyechipiri pasipoti masevhisi eSaint Lucia, kuburikidza nemagweta edu epasipoti epasirese muSaint Lucia, magweta echipiri epasipoti muSaint Lucia uye akanakisa echipiri mapasipoti vanopa mazano eSaint Lucia, vanoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muSanta Lucia, uye vakanyanya mafemu ekuona nezvekupinda muSouth Lucia.
Chechipiri pasipoti masevhisi eSanta Lucia | Chechipiri pasipoti vamiririri muSanta Lucia | Yechipiri mapasipoti magweta muSanta Lucia | Yechipiri mapasipoti magweta muSanta Lucia | Chechipiri pasipoti vanopa mazano veSanta Lucia
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muSanta Lucia?
Ndarama vhiza muSanta Lucia, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara yeSaint Lucia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweSaint Lucia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvisungo zvehurumende, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuSanta Lucia, chirongwa chendarama vhiza yeChristian Lucia inotsigirwa nemasevhisa egoridhe evisa kunaSanta Lucia, kuburikidza nemagweta edu egoridhe emuGreek muSaint Lucia, magweta egoridhe epamusoro eSaint Lucia uye akanakisa evhita vhiza egoridhe eSaint Lucia, vachishanda kumahofisi evhita vhiza eSaint Lucia, uye zvakanakisa. mafemu ekuona nezvekupinda muSouth Lucia.
Ndarama vhiza masevhisi eSaint Lucia | Ndarama vhiza vamiririri muSanta Lucia | Magoridhe vhiza magweta muSanta Lucia | Magoridhe vhiza magweta muSanta Lucia | Goridhe vhiza varairidzi veSanta Lucia
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweCitizenship nekudyara muSaint Lucia?
Kuderera kushoma kweCitizenship nekudyara muSaint Lucia iUS $ 200,000
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuSanta Lucia rweCitizenship nekudyara?
Ehe, gweta redu muSaint Lucia nevamiriri muSanta Lucia vanopa rutsigiro rweCitizenship nekudyara muSanta Lucia.
Ugari neInvestment kuSanta Lucia inodhura?
Mutengo weCitizenship neInvestment kuSanta Lucia uye Citizenship nemari inodiwa mari kuSanta Lucia ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubvunza fizi yeCitizenship neInvestment kuSanta Lucia, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvekutsigira Citizenship neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Citizenship nekudyara kuSanta Lucia kana investor visa kuSanta Lucia?
Citizenship by investment services for inogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeye Citizenship nekudyara kuSanta Lucia kubva kuAsia, Citizenship nekudyara kuSanta Lucia kubva kuAfrica, Citizenship nekudyara kuSanta Lucia kubva kuEurope, Citizenship nekudyara kuSanta Lucia kubva kuSouth America, Citizenship nekudyara kuSanta Lucia kubva kuMalaysia, Citizenship nekudyara kuSanta Lucia kubva kuBangladesh, Citizenship nekudyara kuSanta Lucia kubva kuIndonesia, Citizenship nekudyara kuSanta Lucia kubva kuSri Lanka, Citizenship nekudyara kuSanta Lucia kubva kuNepal, Ugari nekudyara kuSanta Lucia kubva kuIndia uye Citizenship nekudyara kuSanta Lucia kubva kuUAE.
Hugari hwehunyanzvi neInvestment Guidance kweSanta Lucia
Kumbira kubvunza Mahara kwehukama hwako neInvestment kuSanta Lucia
Mazwi akakosha mu Citizenship neInvestment yeSanta Lucia
Ministry yePhysical Development, Dzimba uye Kuvandudza Kwemaguta
Ministry of Dzidzo, Kubudirira Kwevashandi neVashandi
Ministry of Veruzhinji Vashandi, Sustainable Development, Energy, Science uye Technology
Ministry of Commerce, Indasitiri, Enterprise Development uye Zvevatengi Zvinhu
Ministry of Health, Wellness, Human Services, uye Gender Relations
Adventist Nhau Network
Trinidad neTobago Mubatanidzwa weSevhisi Maindasitiri
Gweta General Chambers & Ministry of Justice
Bazi rezveMari uye Zvehupfumi
Ministry of Economic Development, Dzimba, Urban Renewal, Zvifambiso uye Civil Aviation
Ministry of Dzidzo, Kuvandudza, Gender Ukama uye Sustainable Development
Ministry of Health uye Wellness
Bazi rezvekunze, International Trade uye Civil Aviation
Ministry of Legal Affairs, Zvekumba uye National Security
Yunivhesiti yeSouthern Caribbean
Ministry of Agriculture, Fisheries, Physical Planning, Natural Natural uye Co-operatives
East Caribbean Musangano
Ministry of Commerce, Bhizinesi Rekuvandudza, Investment uye Consumer Affairs
Ministry of Social Shanduko, Hurumende Yemunharaunda uye Kugonesa Kwenzvimbo
Hofisi yekutengeserana Negotiations
Ministry of Tourism, Nhoroondo uye neChigadzirwa maindasitiri
Ministry of Commerce, Bhizinesi Bhizinesi, Investment uye Consumer Affairs
Ministry of Youth Development uye Mitambo
Ministry of Home Affairs, Ruramisiro uye Nyika kuchengetedzeka
Ministry yeZvivakwa, Port Services uye Zvifambiso
Iyo Coalition Network of Services Maindasitiri
Tengesa St. Lucia
Ministry of Infuction, maDoko, Simba neVashandi
Ministry of Tourism, Ruzivo uye Broadcasting
Bazi rezvekurima, Kugadzira Chikafu, Hove uye Kuvandudza Kumaruwa
Ministry of Finance, Kukura Kwehupfumi, Kusikwa Kwemabasa, Zvekunze Zvevanhu uye nePublic Service
Ministry of Equity, Nharaunda Ruramisiro, Kuwanisa masimba, Dzekusimudzira Vechidiki, Mitambo neHurumende yeNzvimbo
Link to Dhipatimendi Rekupinda kweSaint Lucia , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Immigration muSanta Lucia